उपत्यकावासीलाइ पानि खुवाउन खटिंदा मेलम्चीमा बगेको इन्जिनियर-सपना, जसको टिकाटालो त भयो, बिहेको सपना अधुरै रहयो ! – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/उपत्यकावासीलाइ पानि खुवाउन खटिंदा मेलम्चीमा बगेको इन्जिनियर-सपना, जसको टिकाटालो त भयो, बिहेको सपना अधुरै रहयो !
उपत्यकावासीलाइ पानि खुवाउन खटिंदा मेलम्चीमा बगेको इन्जिनियर-सपना, जसको टिकाटालो त भयो, बिहेको सपना अधुरै रहयो !
काठमाडौं । मेलम्चीको भेलमा वगेर ज्यान गुमाएका सतीशको परिवार अहिले शो’कमा डुवेको छ । परिवारका सदस्यलाई त्यो सत्य विश्वास गर्न निकै कठिन भइरहेको छ । छोराको भविष्यका लागि आमा बुवाले जिवनमा निकै धेरै संघर्ष गरेका थिए । उनकै भविष्यका लागि आफने दुख विर्सेका थिए । तर इन्जिनियर बनिसकेको जवान छोरालाई अचानक गुमाउनु पर्दा ‘आमा मञ्जु अर्धचेत अवस्थामा छन् । उनको गला सुकेको छ । रुँदारुँदा आमाको आँशु पनि सुकिसकेको छ। बेला-बेला छोरा सम्झिएर मञ्जु भक्कानिन्छन्। रुन्छिन्, कराउँछिन। फेरी एक छिनपछि अचेत।
आमा मञ्जुभन्दाको भन्दा फरुक छैन उनका मृतकका बुवा अमरकिशोर गोइतको। जवान छोरा अब यस दुनियाँबाट धेरै पर गइसकेको भन्दै विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्, उनीहरू। हजुरबुवा, बुवा, आमा सबैजना राइकराइ गरिरहेका छन्। छोरा फर्केर आइदेउ भन्दै आमा विलाप गरिरहेकी छिन्। तर, दैवले चाहेविपरित केही हुँदो रहेनछ संसारमा। छोराको शोकमा डुबेका बुबा अमरकिशोर गोइतको सपना हराएको छ । ७४ वर्षे हजुरबुबा कृष्णवीरको अवस्था नाजुक भएको छ । २५ वर्षको कलिलो उमेरमा निधन भएका सतिशको विवाह समेत निश्चित भइसकेको थियो । छोराको विवाह गरेर वुहारी ल्याउने आमाबुवाको सपना भत्किएको छ
जनकपुरधाम–४ कदम चोकस्थित सतिशको घरमा आफन्त तथा छिमेकीहरूको भीडभाड छ। शोकमा रहेको परिवारका सदस्यहरूलाई आफन्तले सान्त्वना दिइरहेका छन्।जनकपुरबाट एसएलसी र १२ उतीर्ण गरिसकेपछि भारतको बेंगलोरबाट सतीशले सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेका थिए। पढाइ लेखाइमा उनी सानैदेखि अब्बल थिए। सायद त्यसैले उनले इन्जिनियरिङ पढ्ने निधो गरे।भारतबाट इन्जिनियरिङ पढेर आइसकेपछि केही दिन उनी काठमाडौंको निजी फर्ममा जागिर गरे। निजी फर्ममा जागिर गरिरहेकै बेला मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि इन्जिनियरको माग रहेको उनले थाहा पाए। आवेदन भरे। र, जागिर पनि भयो।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरङ परीक्षणका क्रममा गएको मंगलबार दिउँसो सुरुङको १७ नम्बर गेट फु’ट्दा २५ वर्षीय सतीश गोइतसहित दुईजना हराएका थिए । उनीसंगै गाडी चालक राधाकृष्ण थापा समेत हराएका हुन् । तर इन्जिनियर गोइतको शव फेला परेको थियो भने चालक अझै हराइरहेका छन् । सतीशको शवलाई जनकपुर ल्याएर बिहीबार जनकपुरधामस्थित स्वर्गद्वारी घाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। सतीशले सोमबार बिहान घरपरिवारका सदस्यहरुसंग एकघण्टा लामो कुराकानी गरेका थिए। उनले कुराकानीका क्रममा पनि आमावुवा र परिवारका सदस्यको चिन्ता गरेका थिए । तपाइँहरुलाई केहि समस्या भए मलाई तुरन्त फोन गर्नुहोला भन्दै फोन राखेका छोराको अचानक निधनको खबरले परिवार शोकमा डुवेको छ ।
करिब एक वर्षदेखि मेलम्चीमा कार्यरत सतीश बेपत्ता भएको खबर आउनसाथ घरमा रुवावासी सुरु भइसकेको थियो। यद्यपि आफन्तले सतीश सकुशल फिर्ता आउने सान्त्वना दिइरहेका थिए। तर, सतीश त आएनन्, आयो केबल उनको शव। प्रहरी प्रशासनले वेपत्ता नाती खोजबिन गर्न ढिलाइ गरेको किरिया बसेका हजुरबुबा कृष्णवीरको गुनासो छ। ‘सरकारले सतीशलाई खोज्न चासो देखाएन, समयमै उद्धार भएको भए उ जीवीत नै हुन्थ्यो होला,’ कृष्णवीर भन्छन्,‘नातीले किरिया गर्नुपर्नेमा म उसको किरिया बसेको छु।’
२५ वर्षका सतीशको विवाह हुने निश्चित भएको थियो । गएको वैशाखमा उनको टिकाटालो पनि भइसकेको थियो । उनको सप्तरीकै एक युवतीका साथ विवाहको टिकाटालो भएको हो । विवाह मंसिरमा गर्ने तयारी समेत भएको थियो । घरको ठूलो जिम्मेबारी बोक्नै लागेका सतीशको निधनले आफन्तलाई ठूलो पी’डा भएको छ। चार छोराछोरी मध्येका काइँला थिए सतीश। दुई दाजुभाइमध्ये उनी कान्छो। दाइ आतिश प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीका सवारीचालक छन्। दुई दिदी बहिनीको विवाह भइसकेको छ।
बन्द ढोका खोलाउन पशुपतिमा घेराउ,प्रहरीले गर्यो हस्तक्षेप माहोल त,नाब ग्रस्त (भिडियो सहित)
उदयपुरमा पहिलो पटक त्रियुगा नमुना माविले संचालनमा ल्यायो अनलाईन कक्षा
कोरोना महामारीका बिच भारतमा भिषण पहिरो, नौ जनाको को मृत्यु ५७ बेपत्ता